Omenala igwe anaghị agba nchara igwe ndobe na Handrails Manufacturer | Jiannuo
Onye na-emeputa ihe eji eme ihe nke igwe
Jiannuo Akụrụngwa Ga-enwetakwu ndị ahịa na-ahụ maka ya ma nwe ekele maka ezigbo mma
Professionallọ ọrụ ọkachamara na-ejikọta nyocha na mmepe, imewe, imepụta, ahịa, nrụnye injinịa na ọrụ mgbe azụsịrị ọrịre, tumadi na-arụ ọrụ injinia na-adịghị ahụ mma, kọlụm, akụrụngwa nke ụlọ ịsa ahụ, ngwa ihe eji achọta mgbidi, aka ọnụ ụzọ, yana ngwaike na-akwado ya, mpempe akwụkwọ ọla na oru ngo ndi ozo.
Ọdụ ụgbọ elu nke Changi 4
Ebe ọdụ ụgbọ elu mba asaa kachasị n'ụwa n'ụwa taa, ọdụ ụgbọ elu Changi bụ ọdụ ụgbọ elu obodo isi obodo Singapore na ọdụ ụgbọ elu dị mkpa na Eshia. Mpụga Ọdụ newlygbọelu Changi ọhụrụ a mepere ọhụrụ bụ ụlọ nwere okpukpu abụọ, ụlọ 25 dị elu nke nwere nnukwu ala obosara ya dị mita 225,000. A na-atụ anya ime ka ikike njem njem dị ugbu a ruo ihe dị ka nde 82 kwa afọ. Dịka onye nrụpụta pụrụ iche na mpaghara ngwaike, Foshan Jiannuo Hardware Co., Ltd nwere nnukwu nsọpụrụ isonye na oru a site na isoro ndị ahịa anyị na Singapore. JN bụ ọrụ kachasị maka akụkụ igwe anaghị agba nchara: sistemụ igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara, wdg.
Otu n'ime nnukwu ụlọ ahịa ikpeazụ dị na Orchard Road tupu ị nweta Ogige Civic, Orchard Central bụ ebe ịzụ ahịa azụmahịa kwụ ọtọ na Singapore nwere njiri mara ụlọ ya dị ka iko ya na onye na-ahụ maka ime obodo Matthew Ngui nke na-ejide ihe osise dijitalụ eserese dijitalụ. O nwere otutu njiri mara banyere isonye n’iru ahia obodo mbu nke Mediterenian, uzo ime ụlọ kachasi elu uwa Via Ferrata, ndi kasi elu nke ndi ngosi nka nke ndi okacha amara site na ndi ulo ahia ndi nke uwa nile, ndi ulo oru 24/7 na-aru oru na ulo a na achoputara. Dịka onye nrụpụta pụrụ iche na mpaghara ngwaike, Foshan Jiannuo Hardware Co., Ltd nwere nnukwu nsọpụrụ isonye na oru a site na isoro ndị ahịa anyị na Singapore. JN bụ ọrụ kachasị maka akụkụ igwe anaghị agba nchara: sistemụ igwe anaghị agba nchara, wdg.
Marina One, ana - akpọ "GREEN HEART" ma ọ bụ "GREEN VALLY", nnukwu njupụta, jikọtara iji wuo ụlọ dị na etiti mpaghara ego Marina Bay nke Singapore, mejupụtara ọhụụ Urban Redevelopment Authority (URA) nke ime ka Singapore bụrụ “Obodo n’ime Ogige”, abụrụla ụlọ ọhụrụ akara ọhụụ na Singapore ozugbo emechara ya. Dịka onye nrụpụta pụrụ iche na mpaghara ngwaike, Foshan Jiannuo Hardware Co., Ltd nwere nnukwu nsọpụrụ isonye na oru a site na isoro ndị ahịa anyị na Singapore. JN bụ ọrụ maka igwe anaghị agba nchara: igwe igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara na ngwa mma, igwe anaghị agba nchara ụzọ, igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara. , igwe anaghị agba nchara, bralard steel, panold igwe anaghị agba nchara, igwe igwu mmiri, wdg.
Hospitallọ ọgwụ Sengkang
Ihe oru ngo nke ulo ogwu nke Sengkang meriri Platinum Award nke Green Construction Authority's Green Building Mark. Ihe oru ngo a, nke kpuchie onodu ihe dika ogha gburugburu 228,000, bu ulo oru nlekọta ahuike. O nwere ụlọ ọgwụ etiti, ụlọ ọgwụ obodo na ọtụtụ ụlọ ọgwụ ọkachamara. Mgbe emechachara ya, ọ ga-eme ka ahụike ahụike nke ndị bi na Sheng Gang. Dịka onye nrụpụta pụrụ iche na mpaghara ngwaike, Foshan Jiannuo Hardware Co., Ltd nwere nnukwu nsọpụrụ isonye na oru a site na isoro ndị ahịa anyị na Singapore. JN bụ nke kachasị maka akụkụ igwe anaghị agba nchara: sistemụ igwe anaghị agba nchara, igwe mgbochi nke igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara ịre ahịa, wdg.
Jiannuo Akụrụngwa guzobere ikike ọrụ aka siri ike nke ndị injinia dị elu, ndị na-ese ihe na ndị ọrụ aka ọrụ aka. O weputala ihe eji emeputa ihe nke ndi mba ozo, ma eweputa ngwa ahia ya n’uzo ndi usoro teknuzu ndi ozo.
Ebumnuche ya inye ndị ahịa ezigbo ọmarịcha, arụmọrụ, akwụkwọ ọgụgụ na ọdịdị pụrụ iche. Ngwaahịa a. N'otu oge ahụ, Kenuo Hardware na-azụlite teknụzụ ọhụụ, usoro ọhụụ, na ngwaahịa ọhụrụ dabara adaba maka ngwa mma eji achọ mma ugbu a iji kwekọọ na mmepe ahịa.
Nye ndi ahia ahia di elu, ihe di omimi, ihe nlere di iche. N'otu oge ahụ, Kenuo Hardware na-azụlite teknụzụ ọhụụ, usoro ọhụụ, na ngwaahịa ọhụrụ dabara adaba maka ngwa mma eji achọ mma ugbu a iji kwekọọ na mmepe ahịa.
Ihe ngwaike Jiannuo ga-enwetakwu ndi ahia ichota ya na inye ya ekele.
Onye ahia anyi buru uzo, nkwa doro anya, Meputa ihe omuma.
Igwe anaghị agba nchara mkpuchi, mkpuchi nke ọma, mkpuchi mkpuchi
304 igwe anaghị agba nchara na-ekpuchi, 316 igwe anaghị agba nchara na-ekpuchi, na-acha nchara nchara na-ekpuchi, mkpuchi mmiri mkpuchi, mkpuchi ụgbọ elu, na-emebi mkpuchi, ndị obodo na-emebi mkpuchi.
Igwe nchara nchara nchara
A na-eji ụlọ ọrụ ọla kọpa dị na usoro, na-enye ndị mmadụ inwe nkụda mmụọ, doro anya. Cleutain Courtain kwesịrị ekwesị maka ịchọ mma n'ụlọ, ụlọ ahịa, ọdụ ụgbọ elu, ụlọ na ebe ndị ọzọ, ka enwere ike ịbawanye ọnọdụ ahụ.
Mpempe akwụkwọ nchara nchara na-eyi akwa akwa, na-enweghị isi na-enweghị isi, mkpuchi eji agba aja aja
Mpempe akwụkwọ anaghị agba nchara nchara igwe anaghị agba nchara igwe anaghị agba nchara
Eriri eji agba nchara; Aka igwe anaghị agba nchara; Njikọ ngwọta anaghị agba nchara
Ka ọ dị ugbu a, Jiannuo ehiwela ụlọ ọrụ na-ere ahịa siri ike na mgbe a gbasasịrị azụmaahịa ma guzobe ezigbo ụlọ ọrụ, nke ndị ahịa anyị nwere ekele ma mata ya.
Anyị kwenyere na n’okpuru echiche ọrụ nke “ndị ahịa mbụ, nke mbụ nke mbụ”, a ga-amata Kenuo Hardware ma nwee ekele karịa ndị ahịa na ụlọ na mba ofesi, ọ ga-aga n’ihu na-azụ ma sie ike.
Naanị gwa anyị ihe ịchọrọ, anyị nwere ike ịme karịa karịa ka ị chere.